July 2021 - Mega Wave
Zaw Gyi အောကျတှငျ Unicode နှငျ့ ဖတျရှု့နိုငျပါသညျ အိမ်တိုင်း၏မီးဖိုချောင်တွင်မရှိမဖြစ်သော အထူးသတိထားသင့်တဲ့ အန္တာရာယ်ရှိသောကျောက်ငရုတ်ဆုံအကြောင်း မြို့မြို့တောတော အိမ်တိုင်း၏ မီးဖိုချောင်တွင်မရှိ၍မဖြစ်သော ငရုတ်ဆုံများမှာ ရှိနေတတ် ကြလေသည် ငရုတ်သီး အထောင်းများ၍လည်း ငရုတ်ဆုံဟုတွင်ကျယ်စွာခေါ်ဝေါ် ကြခြင်းဖြစ်သည် ခရမ်းချည်သီးခရမ်ခရမ်းသီး
Zaw Gyi အောကျတှငျ Unicode နှငျ့ ဖတျရှု့နိုငျပါသညျ “အပ်”ပျောက်ရင်”ဆင်”နဲ့ရှာပါ ဒီရှေးစကားလေးကို ငယ်စဉ်ထဲကကြားဖူးနားဝရှိခဲ့တာကြာပါပြီ သို့သော်ငြား အဲဒီစကားကို အရင်တုန်းကတော့ သာမန်အပေါ်ယံအတွေးလေးနဲ့တွေးမိခဲ့ဖူးပါတယ် “အပ်ကလေးတစ်ချောင်းပျောက်တာများ ဆင်စီးပြီးရှာစရာလား” ဆိုတဲ့အတွေးထက်ပိုပြီး နက်နက်နဲနဲမတွေးမိ မစဉ်းစားမိခဲ့ဘူး နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ စာပေဗဟုသုတတွေ
Zaw Gyi အောကျတှငျ Unicode နှငျ့ ဖတျရှု့နိုငျပါသညျ နင်းပြားဘဝမှ ကုန်းထခြင်း ကျွန်တော့် ဘဝ ဖြစ်ရပ်မှန် နင်းပြားဘဝမှ ကုန်းထခြင်း ကျွန်တော့်ကို မြင်းခြံ မြို့နယ်၊ ခေါင်းကွဲရွာတွင် မွေးခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်အဖေသည် ဆေးရွက်ကြီးစိုက်သော
Zaw Gyi အောကျတှငျ Unicode နှငျ့ ဖတျရှု့နိုငျပါသညျ သင့်ကို အမြန်ဆုံး ဆင်းရဲစေနိုင်တဲ့ အမူအကျင့် (၅) မျိုး ချမ်းသာမယ့် နည်းလမ်းဆိုတာ ရှိသလို၊ ဆင်းရဲမယ့် နည်းလမ်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ချမ်းသာမယ့် နည်းလမ်းကို
Zaw Gyi အောကျတှငျ Unicode နှငျ့ ဖတျရှု့နိုငျပါသညျ ၁. နေရာလွတ်ပြည့်နေခြင်း Storage 16GB လောက်ကို 500MB လောက်ပဲ ကျန်အောင် ပြွတ်သိပ်သွင်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ဖုန်းလေးလံလာမှာအမှန်ပါပဲ။ ဖုန်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့ App cache
သင်္ဘောသီးတွေ ပြွတ်ခဲနေအောင် သီးစေသောနည်း
Zaw Gyi အောကျတှငျ Unicode နှငျ့ ဖတျရှု့နိုငျပါသညျ အ စေ့ ကို တစ် ရက် နေ လှန်း ပြီး ပျိုး ပင် ဖောက် ပါ။ အဲ့ ဒီ
Zaw Gyi အောကျတှငျ Unicode နှငျ့ ဖတျရှု့နိုငျပါသညျ လူသူအရောက်ပေါက်မရှိ တောခြုံတွေပိန်းပိတ်နေလို့ နွားတွေမကြာခဏ ပြုတ်ကျတယ် ဒေသခံအဖိုးအဖွားတွေပြောပြလို့ ကြားဖူးတယ် ကျန်စစ်သားမင်းကြီး ရေ ရှာတာ လှံနဲ့စိုက်ပြီး တွင်းပေါင်း တရာတိတိမှာ ရေရတယ် အဲ့ရေထွက်တဲ့
တစ်ရွာလုံးနီးပါး ရှိသမျှမိန်းကလေးတိုင်းလိုလို ဆံပင်အရှည်ထားပြီး မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းတဲ့ ရွာ
Zaw Gyi အောကျတှငျ Unicode နှငျ့ ဖတျရှု့နိုငျပါသညျ တစ်ရွာလုံးနီးပါး ရှိသမျှမိန်းကလေးတိုင်းလိုလို ဆံပင်အရှည်ထားပြီး မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းတဲ့ ရွာ ခေတ် ကာလ တိုးတက် လာတာ နဲ့ အမျှ ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ
မြန်မာငွေစက္ကူပေါ်ကမောင်ကောင်းဆိုတာဘယ်သူလဲ? နှောင်းလူငယ်တွေ သိစေဘို့
Zaw Gyi အောကျတှငျ Unicode နှငျ့ ဖတျရှု့နိုငျပါသညျ တစ်ချိန်ကမြန်မာငွေစက္ကူပေါ်က မောင်ကောင်းဆိုတာ ၁၉၅၅ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က မြန်မာ့ငွေသည် အလွန်တန်ဖိုးရှိခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာသည် မြန်မာကျပ်ငွေ ၆ကျပ်နှင့် ညီမျှသည်။ မည်သည့်နိုင်ငံကိုသွားသွား အခြားငွေလဲစရာမလို
သနပ်ခါးတုံးတွေကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး မိူမတက်အောင်ပြုလုပ်နည်း
Zaw Gyi အောကျတှငျ Unicode နှငျ့ ဖတျရှု့နိုငျပါသညျ သနပ်ခါးတုံးတွေကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး မိူမတက်အောင်ပြုလုပ်နည်း သနပ်ခါးကို တနှစ်ပတ်လုံး မှိုမတက်အောင်ပြုလုပ်နည်း သနပ်ခါးချစ်သူ အမျိုးတို့ရေ ဒီနေ့ နေလဲသာသမို့ ဗဟုသုတ လေးတခုလုပ်ရအောင်လား။ သနပ်ခါးတွေလိမ်းမကုန်ခင် ဒီတိုင်းထားမယ့်အစား